YoYarLay Online Media - ပြည်တွင်း
လူပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်အထိ လာရောက် ဆော့ကစားပြီးဖြစ်တဲ့ Breakout Yangon ရဲ့Surreal Escape Experience Game
စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် ကနေ (၈) ယောက်လောက်ထိများ ရှိကြလား? အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေ အတူပေါင်းပြီး ခေါင်းအတော်စားရမယ့် mission တွေကို အချိန် တစ်နာရီအတွင်း ဖြေရှင်း ကျော်ဖြတ်ကြည့်ချင်လား?
မောင်တောမှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဖမ်းမိပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ကျီးကန်းပြင်ကျေးရွာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မတ် ၃၁ ရက် နံနက်ပိုင်း ကျီးကန်းပြင်(တောင်) ကျေးရွာဘက်ကနေ အောင်မင်္ဂလာ ကျေးရွာဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ CZI-125 အမျိုးအစား အပြာရောင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးစဉ် မောင်းနှင်လာသူ လွယ်ထားတဲ့ အနက်ရောင် ကျောပိုးအိတ်အတွင်းက WY စာတန်းပါ စိတ်ကြရူးသွပ်ဆေးပြား ၆၈၂၅၀ ပြား(ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၁၃၆၅ သိန်း) ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပြည်တွင်းသတင်းတိုကဏ္ဍမှာ တပ်ချုပ်က သမ္မတသစ်ထံ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပို့တဲ့သတင်း၊ PIONEER HEXAGON GROUP ကုမ္ပဏီက သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ သတင်း၊ စန္ဒယားဦးတင်ဝင်းလှိုင်ရဲ့ မမှန်မကန်ပြောကြားချက်တွေကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းတွေ အပါအဝင် သတင်းတို ၆ ပုဒ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...
AI နည်းပညာသုံး ဓာတ်ပုံပညာရပ်များ၏ အနာဂတ်ကို Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Pro မှ မိတ်ဆက်
Huaweiက ကမ္ဘာ့မိုဘိုင်းဖုန်း ဓာတ်ပုံလောကကို လှုပ်ခတ်စေမယ့် P20 Series ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ Grand Palais ခန်းမှာ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Pro တို့ကို နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် AI နည်းပညာများနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး Huawei P20 Pro ဟာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကင်မရာအတွေ့အကြုံသစ်တစ်ရပ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Leica ကင်မရာသုံးလုံးပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါး နဲ့ ကိုရင်နှစ်ပါး ဆေးရုံရောက်
တအန်းဒေသ မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ခွဲ မန်ခေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်မိုကျေးရွာမှာ ဒီလ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်း ၇ နာရီ ၄၅ နာရီအချိန်မှာ ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါး နဲ့ ကိုရင်နှစ်ပါးက ပန်မိုကျေးရွာထိပ်မှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပျိုးပင်တွေနဲ့ ပန်ပင်တွေကို ရှင်းလင်းဖို့ သွားရောက်ရာမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ တအောင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (TNLA) က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပြည်တွင်းသတင်းတိုကဏ္ဍမှာ နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်တာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို လက်မှတ်ရေးထိုးတာ နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ အပါအ၀င်
အရက်အတု ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့သူကို ဖမ်းမိပြီ
မတ် (၁၇) ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက လှိုင်မြို့နယ် ပိတောက်ချောင်း နယ်မြေရဲစခန်းမှူးနဲ့ အဖွဲ့ဟာ သက်သေများနဲ့အတူ လှိုင်မြို့နယ် အမှတ် (၄)ရပ်ကွက် ၊ ရတနာမွန် (၂) လမ်း၊ အမှတ် (၁၃) နေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်း နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်မျိုးစုံကို ရောစပ်အတုပြုလုပ်နေတယ်လို့ သတင်းရတာကြောင့်
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပြည်တွင်းသတင်းတို ကဏ္ဍမှာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကို အဆင့်မြှင့်တင်တော့မယ့် သတင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြန်ရောက်နေထိုင်လိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို စိစစ်လက်ခံသွားမယ့်သတင်း၊
“စားသုံးနိုင်တဲ့ နွေပန်းဥယာဉ်” အမည်ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုရှိသော ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်နှင့် အစာသွပ်မုန့်မျိုးစုံကို BreadTalk မှ မိတ်ဆက်
BreadTalk Myanmar မှ မကြာမီ ရောက်ရှိလာတော့မည့် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကို စားသုံးသူများနှင့်အတူ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
V14 EV dynamic range အထိ ရနိုင်တဲ့ AI-Powered Super HDR ကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ Vivo
Vivo ဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာ နောက်ဆုံးပေါ် AI-powered Super HDR အကြောင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Backlit Photography မှာလည်း အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ Vivo ဟာ အခုလည်း အသုံးပြုသူတွေကို နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဆီ ထပ်ပြီးပို့ဆောင်လိုက်ပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်အရသာနဲ့ အချိုရည်သစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ကိုကာကိုလာ
လန်းဆန်းပြီးအမောပြေစေတဲ့ အသင့်သောက် Ice Tea အရသာ Heaven and Earth အချိုရည်သစ်ကို Coca-Cola Myanmar က စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
MPT က ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျ ဈေးနှုန်းတွေကို ပိုမိုသက်သာတဲ့နှုန်းထားများသို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ MPT မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေအတွက် ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျ နှုန်းထားတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၈) ရက်နေ့က စပြီး ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း MPT က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒေတာပမာဏကို သုံးစွဲသူများ စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် တယ်လီနော စီစဉ်
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးက တယ်လီနောအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ဒေတာသုံးစွဲမှုပမာဏကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ကုန်ကျမှုကိုလည်း၂၀% အထိသက်သာသွားစေမယ့် ‘ဒေတာတန်တန်’ နဲ့ ‘ဒေတာမြန်မြန်’ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံသစ်၂မျိုးကိုတယ်လီနောက စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၁၂ ရက်နေ့ မနက် ၁ နာရီခန့်တွင် ဖြူးမြို့ အနောက်ဘက်ကို ဗဟိုပြု၍ Richter Scale ၆.၀ ပမာဏ ရှိငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီး ငလျင်အသေးစားများ ဖြစ်ပွားခဲ့
၁၂၊ ၀၁၊ ၂၀၁၈ သောကြာနေ့ မနက် ဝဝ : ၅၆ နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ဖြူးမြို့ အနောက်ဘက် ပဲခူးရိုးမ ကို ဗဟိုပြုပြီး ပမာဏ Richter Scale ၆.၀ ပမာဏရှိငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Richter Scale ၅.၃ ရှိတဲ့ ငလျင် ၃ ခု၊ ၄.၃ Richter Scale ပမာဏရှိ ငလျင်နဲ့ ၄.၇ Richter Scale ပမာဏာရှိ ငလျင်တို့ လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ အမျိုးသမီးဦးရေ ၁၀၀ ကျော်လောက်ဟာ နေ့စဉ်တိုင်း အိမ်ထောင်ဖက် (သို့) မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံနေရ
Geje Eustaquio ပြောပြသော ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများ
Thiha ONE Championship
အချိန်မှားပြီး စားမိလေ့ရှိတတ်ကြတဲ့ အစားအသောက် (၄) မျိုး
နေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာအသေးအဖွဲလေးတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့ ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လိုကြောင်း ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Jordan Boy